Myanmar Monk Student Association: July 2011
IELTS ဖြေဆိုမည့်သူများ မိမိ အင်္ဂလိပ်စာအဆင့်ကို ချက်ချင်းသိနိုင်မည့် အခမဲ့အစီအစဉ် Future Way မှစီစဉ် .
Future Way Co.ltd မှ IELTS ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား/သူများအတွက် IELTS မဖြေဆိုခင် မိမိတို့၏ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးနိုင်ရန်အတွက် Online Test တစ်ခုကို စီစဉ်ထားကြောင်းသိရသည်။ Future Way Co.ltd မှ စီစဉ်သည့် Online Test ကို Password Test လို့အမည်တွင်ပြီး IELTS နှင့် တူညီသော Level အဆင့်တွင်ရှိသည်။ ၎င်း Test ကို UK အထင်ကရ တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် University of Essex အပါအ၀င် အခြားသော universities ကြီး (၇၅) ခုမှလည်း ၎င်းတို့၏ ၀င်ခွင့်အတွက် လက်ရှိ အသုံးပြုနေသော Test ဖြစ်သည့်အပြင် British Society မှလည်း အသိအမှတ်ပြုထားသော Test တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်း Exam တွင် Reading နှင့် Writing သာဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ Results ကို Online တွင် ချက်ချင်းသိရှိနိုင်ပြီး UK ရှိ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သော Password Society မှ ပေးအပ်မည့် UK Certificate ကို လည်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း Test ကို Future Way မှ အခမဲ့ဖြေဆိုနိုင်ရန် Offer ပေးထားပါသည်။ ဖြေဆိုလိုသူများအနေဖြင့် Future Way Education & Services ၌ Register ပြုလုပ်နိုင်ပြီး Register ပြုလုပ်ရာတွင် IELTS ဖြေဆိုရန်ငွေသွင်းထားသည့် Slip၊ Passport (သို့) မှတ်ပုံတင်နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသာယူဆောင်လာရန်လိုကြောင်း Future Way မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုလို အခွင့်အရေးတွင် ကျောင်းသားများ မိမိတို့၏ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးရန်လက်မလွှတ်သင့်ကြောင်း နှင့် ထိုအစီအစဉ်ကိုပါဝင်လိုသူများအနေဖြင့် Future Way Education & Services ဖုန်း(241099,254185) သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Wednesday, 13 July 2011
ဆရာ ဦးဝင့်ကျော် LCCI Level I+II ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာခေါ်ယူုခြင်း .
ဆရာဦးဝင့်ကျော် LCCI ပညာသင်ဆု အပတ်စဉ် (၂) အတွက် အောက်ပါအရည်အချင်းဖြင့် ကိုက်ညီသူများ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
၂။ မိဘနှစ်ပါးစလုံး ကွယ်လွန်သူများ၊ မိဘတစ်ပါးပါးကွယ်လွန်သူများ၊ မိဘနှစ်ပါးစလုံးပင်စင်စားများ၊ မိဘနှစ်ပါးစလုံးလစာနည်းဝန်ထမ်းများနှင့်
၃။ ပညာသင်ဆုရရှိသင့်ကြောင်း မိသားစုအခြေအနေကိုဖော်ပြထားသော ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးထောက်ခံစာ။
၄။ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံစာ
၅။ တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမ (သို့) အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ (သို့) သင်တန်းတစ်ခုခုမှ အကြီးအကဲ သင်တန်းဆရာတစ်ဦးဦး၏ ပညာသင်ဆုပေးသင့်ကြောင်း
၆။ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူနှင့် မူရင်း
၇။ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူနှင့် မူရင်း
၈။ ဓါတ်ပုံ ၂ ပုံ
မှတ်ချက်။ ။ LCCI Level I+II အောင်မြင်ပြီးသူများသည် သက်ဆိုင်ရာ သင်တန်းကျောင်းမှ သင်တန်းတက်ရက်မှန်ကန်ကြောင်းနှင့် ရိုးသားစွာကြိုးစားကြောင်း ထောက်ခံချက်များအရ LCCI III ပညာသင်ဆုအတွက် ဆက်လက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဆရာဦးဝင့်ကျော် LCCI ပညာသင်ဆုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့
အမှတ် (၉၀၅) (၉) လွှာ၊ သံဈေးကွန်ဒို လမ်းမတော်လမ်း၊
၁၊ ဗုဒ္ဓပညာ (ရွှေညဝါ) နန္ဒာသိန်းဇံ
၂၊ အမေစားသော ထမင်းတစ်နပ် ဦးသုခ
၃၊ အဘိဓမ္မာမှပေးသော ဘဝအမြင် (ရွှေညဝါ)ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန်
၄၊ တန်ဖိုးရှိတဲ့လူ (မော်လမြိုင် ) အတ္တကျော်
၅၊ စိတ်မျက်စိကို ဖွင့်ရအောင် အတ္တကျော်
၆၊ ကနောင်အလွမ်း၊ ထူးဆန်းထွေလာမြေကမ္တွာ(ကနောင်) အောင်ကျော်ဆန်း
၇၊ ရေးသူ၏ ပရိယာယ်၊ ဖတ်သူ၏ ခံစားမှု (ရိူင်းဟုတ်) အောင်ပြည့်
၈၊ လူနှင့် ပညာ (ဟင်္သာတ) အောင်သင်း
၉၊ လူငယ်တွေနဲ့ အနာဂတ် (ကျောက်ပန်းတောင်း) အောင်သင်း
၁ဝ၊ အမွေ (YMCA) အောင်သင်း
၁၁၊ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ အောင်သင်း
၁၂၊ လက်ခံလိုက်စမ်းပါ (စာပေလောက) အောင်သင်း
၁၃၊ လူနှင့် ပညာ (အသုတ်) အောင်သင်း
၁၄၊ ပညာ (မုံရွာ) အောင်သင်း
၁၅ ယနေ့လူငယ်နှင့် ယနေ့ရသစာပေ (မကွေး) အောင်သင်း
၁၆၊ ယနေ့ လူငယ် ဘ0xlaxာင်မှု (ပျော်ဘွယ်) အောင်သင်း
၁၇၊ ဗမာတွေ ပျော်ကြပါစေ (ကနောင်) အော်ပီကျယ်
၁၈၊ ဗမာတွေ ပျော်ကြပါစေ ( စင်္ကာပူ ၂ဝ၁ဝ) အော်ပီကျယ်
၁၉၊ အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (ဟင်္သာတ) အော်ပီကျယ်
၂ဝ၊ အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (အောင်လံ) အော်ပီကျယ်
၂၁၊ အသိပညာဖြင့် မောင်းနှင်သော (မော်လမြိုင်) အော်ပီကျယ်
၂၂၊ ပျော်ရာမှာမနေရ၊ တော်ရာမှာနေရ (UAE) အော်ပီကျယ်
၂၃၊ ဘဝအရေးနှင့် ကာတွန်းအတွေး (အသုတ်) အော်ပီကျယ်
၂၄၊ လူသစ် စိတ်သစ် (အုန်းနှဲ) ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
၂၅၊ စကားလက်ဆောင် (ရှိုင်းဟုတ်) ချစ်နိုင် (စိတ်ပညာ)
၂၆၊ ၂၁ ရာစု၏ စိမ်ခေါ်မှုကို ရင်ဆိုင်ခြင်း (ရှိုင်းဟုတ်) ချစ်ဦးညို
၂၇၊ အနုပညာဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာခံစားသူ (စင်္ကာပူ) ချစ်ဦးညို
၂၈၊ သို့ ကျောက်ပန်းတောင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) ချစ်ဦးညို
၂၉၊ ကျွန်တော် ခံစားမိသလို ပြောဆိုပါမည် - ၂ (မြောင်းတကာ) ချစ်ဦးညို
၃ဝ၊ သို့ မော်လမြိုင်၊ မှ ချစ်ဦးညို ချစ်ဦးညို
၃၁၊ ကျွန်တော်ခံစားမိသလို ပြောဆိုပါမည် (မြင်းခြံ) ချစ်ဦးညို
၃၂၊ သို့ အုန်းနှဲ၊ မှ ချစ်ဦးညို ချစ်ဦးညို
၃၃၊ သို့ တောင်ငူ၊ မှ ချစ်ဦးညို (တောင်ငူ) ချစ်ဦးညို
၃၄၊ ဇရပ်ကုန်းအတွက် စာပေလက်ဆောင် (မြောင်) ချစ်ဦးညို
၃၅၊ အနုပညာ ဖန်တီးသူနှင့် အနုပညာ ခံစားသူ (အသုတ်) ချစ်ဦးညို
၃၆၊ နည်းပညာ (ရွှေညဝါ) ချစ်ဦးညို
၃၇၊ အမေဟူသည် အလွမ်းသည် ချစ်စံဝင်း
၃၈၊ စိတ်ဓါတ်ြုပပြင် ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ရေး ဒေါက်တာ ခင်မောင်ညို
၃၉၊ လူတိုင်းအတွက် အသုံးချစိတ်ပညာ (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ကျော်စိန်
၄ဝ၊ ဟန်ချက်ညီ စိတ်ထား (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ သိန်းလွင်
၄၁၊ ရယ်စရာ မောစရာ (ရှိုင်းဟုတ်) အီကြာကွေး
၄၂၊ အသိပညာဖြင့်ြုပပြင်ပြောင်းလဲရမည့် ဤကမ္ဘာ ဟိန်းလတ်
၄၃၊ ဆဒ္ဒန်ဆင်မင်းဇတ်မှ လူ့သဘာဝ (မော်လမြိုင်) လှထွန်း (မြန်မာစာ)
၄၄၊ စိတ်ပညာနှင့် ယဉ်ကျေးမှု (ရှိုင်းဟုတ်) သိပ္ပံ မှူးတင်
၄၅၊ စာရေးဆရာ၏မှတ်စု (စင်္ကာပူ ၂ဝဝ၉) ဂျူး
၄၆၊ ဘဝနှင့်စာပေ (မော်လမြိုင်) ဂျူး
၄၇၊ စာရေးဆရာ၏တစ်ယောက်၏ မှတ်စုများ (မြင်းခြံ) ဂျူး
၄၈၊ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ (တောင်ငူ) ဂျူး
၄၉။ စာဖတ်ပါ၊ တွေးပါ (ကျောက်ပန်းတောင်း) ကောင်းသန့်
၅ဝ။ စာပေရေးရာ (မြောင်းတကာ) ကောင်းသန့်
၅၁၊ ဘ၀ထဲက စာများ ခက်မာ
၅၂၊ စာပေရေးရာ (မော်လမြိုင်) ခင်ခင်ထူး
၅၃၊ အညာဓလေ့ ရွာဓလေ့ (တောင်ငူ) ခင်ခင်ထူး
၅၄၊ အမွေခံထိုက်စေ (မော်လမြိုင်) ကိုတာ
၅၅၊ ပုံပြင်များ (မော်လမြိုင်) ကျော်ရင်မြင့် (ဖေလင်းသစ်)
၅၆၊ လမ်းပေါ်မှာ(တောင်ငူ) ကျော်ရင်မြင့် (ဖေလင်းသစ်)
၅၇၊ ဘဝ အောင်မြင်ရေး (မော်လမြိုင်) ကြည်မင်း (ကျော်စောမင်း)
၅၈၊ ဗျူတီပါလာနှင့် မဟာသြသဓ (ရှိုင်းဟုတ်) ကြည်မင်း (ကျော်စောမင်း)
၅၉၊ ဘဝမှစာ၊ စာမှဘဝ (ကျောက်ပန်းတောင်း) လယ်တွင်းသား စောချစ်
၆ဝ၊ ဘဝမှစာ၊ စာမှဘဝ (တောင်ငူ) လယ်တွင်းသား စောချစ်
၆၁၊ ဘဝမှစာ၊ စာမှဘဝ (မင်္ဂလာဒုံ) လယ်တွင်းသား စောချစ်
၆၂၊ မျှတသော စိတ်ထား (ရှိုင်းဟုတ်) လယ်တွင်းသား စောချစ်
၆၃၊ စာပေနှင့် ဘဝအောင်မြင်ရေး လယ်တွင်းသား စောချစ်
၆၄၊ သန့်စင်လှပ အိမ်ရှင်မ (ရှိုင်းဟုတ်) လဲ့လဲ့တင်
၆၅၊ အမျိုးသားရေး တေးဂီတ (၂ဝဝ၉) မာမာအေး
၆၆၊ စာဖတ်ခြင်း အနုပညာ မေငြိမ်း
၆၇၊ ကျန်းမာရေး (ရှိုင်းဟုတ်) မောင်မောင်လှိုင် (အပ်စိုက်ကု)
၆၈၊ ဘဝမရှုံးသူများ (ရှိုင်းဟုတ်) မောင်စိန်ထွေး
၆၉၊ သုတရသစာပေ (ကျောက်ပန်းတောင်း) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
၇ဝ၊ ရသစာပေ (စင်္ကာပူ ၂ဝ၁ဝ) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
၇၁၊ သုတရသစာပေ (မင်္ဂလာဒုံ) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
၇၂၊ သုတရသစာပေ (မြောင်) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
၇၃၊ ရသစာပေ (အသုတ်) မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
၇၄၊ အမျိုးသားနေ့ မောင်စွမ်းရည်
၇၅၊ ရယ်စရာ မောစရာ (ကနောင် ၂ဝ၁ဝ) မောင်သာချို
၇၆၊ နှလုံးသားကို အလှဆင်ပါ (မြောင်းတကာ ) မောင်သာချို
၇၇၊ နှလုံးသားကို အလှဆင်ပါ (မော်လမြိုင် ) မောင်သာချို
၇၈၊ နှလုံးလှပါစေ (အောင်လံ ၂ဝ၁၁) မောင်သာချို
၇၉၊ ဘဝအလှအတွက် စာအလှများ (ကျောက်ပန်းတောင်း) မောင်သာချို
၈ဝ၊ စာအလှမှ ရွာအလှသို့ (တောင်ငူ) မောင်သာချို
၈၁၊ တကယ့်လူ မောင်သာချို
၈၂၊ မိခင်ဖြစ်လာမည့် အပျိုစင်များ (ရှိုင်းဟုတ်) မြမြလှိုင်
၈၃၊ တစ်ခါသုံး လူ့အဖွဲ့အစည်း (စင်္ကာပု) နေဝင်းမြင့်
၈၄၊ စာပေရေးရာ (မော်လမြိုင်) နေဝင်းမြင့်
၈၅၊ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က (အောင်လံ) နေဝင်းမြင့်
၈၆၊ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က (တောင်ငူ) နေဝင်းမြင့်
၈၇၊ ကျွန်မနှင့် စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) နုနုရည် (အင်းဝ)
၈၈၊ ကျွန်မဖတ်တဲ့စာ၊ ကျွန်မရေးတဲ့စာ (တောင်ငူ) နုနုရည် (အင်းဝ)
၈၉၊ ရသစာပေ (အသုတ်) နုနုရည် (အင်းဝ)
၉ဝ၊ စာပေနှင့် ဘဝ နုနုရည် (အင်းဝ)
၉၁၊ စာရေးသူမှ စာဖတ်သူသို့ (ကျောက်ပန်းတောင်း) နွမ်ဂျာသိုင်း
၉၂၊ စကားလုံးများဖြင့် ကခုန်ခြင်း ငြိမ်းမင်း
၉၃၊ ဘ0xJu ဇာတ်ညွှန်း ငြိမ်းမင်း
၉၄၊ စာပေရေးရာ (မော်လမြိုင်) ဖေမြင့်
၉၅၊ မြန်မာသံ ရွှေပြည် ဦးဘတင်
၉၆၊ မျက်ကြည်လွှာ (မင်္ဂလာဒုံ) သန်းမြင့်အောင်
၉၇၊ လူမှုဘဝ လူမှုဝန်းကျင် (မြောင်) သန်းမြင့်အောင်
၉၈၊ မသိမသာ (စစ်ကိုင်း) ဦးဘုန်း (ဓါတု)
၉၉၊ ခေါင်းလောင်းသံ (မော်လမြိုင်) ဦးဘုန်း (ဓါတု)
၁ဝဝ၊ အိမ် (မြင်းခြံ) ဦးဘုန်း (ဓါတု)
၁ဝ၁၊ သရက်စေ့ (မှော်ဘီ) ဦးဘုန်း (ဓါတု)
၁ဝ၂၊ အိမ် (တောင်ငူ) ဦးဘုန်း (ဓါတု)
၁ဝ၃၊ အဖိုးပြောသော ပုံပြင်များ (မြောင်) ဦးဘုန်း (ဓါတု)
၁ဝ၄၊ သရက်စေ့ (မြောင်) ဦးဘုန်း (ဓါတု)
၁ဝ၅၊ စာကောင်းပေကောင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း) ဦးသိန်းလွင်
၁ဝ၆၊ စာပေနှင့် အနုပညာ ဝင်းဖေ
၁ဝ၇၊ စွန့်ဦးတီထွင် (ရှိုင်းဟုတ်) ရဲမြင့်(စွန့်ဦးတီထွင်)
၁ဝ၈၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ရောဂါ (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ကေသီထွန်း
၁ဝ၉၊ ကြက်၊ ငှက်တုပ်ကွေးရောဂါ (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်
၁၁ဝ သွေးဆုံးတာနဲ့ အိုရောလား (ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ ကျော်ညွန့်
၁၁၁၊ သင့်အရေပြားကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ ဒေါက်တာ မြင့်မြင့်ကြည်
၁၁၂၊ ကုရာနတ္တိ(ရှိုင်းဟုတ်) ဒေါက်တာ တင့်လွင်
by: Pyae Sone Aung
လက်ရွေးစင် စာပေဟောပြောပွဲ (၁၁၂ ပုဒ်)ကို ဒေါင်းရန်
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ထာဝရသီရိ on Thursday,7July 2011
ခေါင်းစဉ်အလိုက်ပို့စ်များ စာပေဟောပြောပွဲများစုစည်းမှု |
ဇါတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့ မိဘကျင့်ဝတ် ၅- ပါး သားသမီးကျင့်ဝတ် ၅-ပါး ဆရာကျင့်ဝတ် ၅-ပါး တပည့်ကျင့်ဝတ် ၅-ပါး မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ် ၅-ပါး မကောင်းမြစ်ထာ၊ ကောင်းရာညွှန်လတ်၊ အတတ်သင်စေ၊ ပေးဝေနှီးရင်း၊ ထိမ်မြားခြင်းလျှင်၊ ၀တ်ငါးအင်၊ ဖခင် မယ်တို့တာ။
(၅) လက်ထပ်ထိမ်းမြား ပေးရခြင်း၊ ကျွေးမွေးမပျက်၊ ဆောင်ရွက်စီမံ၊ မွေခံထိုက်စေ၊ လှုမျှဝေ၍၊ စောင့်လေမျိုးနွယ်၊ ၀တ်ငါးသွယ်၊ ကျင့်ဖွယ် သားတို့တာ။
(၃) မိဘစကားကို နားထောင်၍ မိဘတို့အမွေကို ခံထိုက် အောင် ပြုလုပ်ခြင်း၊
(၄) မိဘတို့ ကွယ်လွန်သောအခါ မိဘတို့အတွက် ရည်စူး၍ ကုသိုလ်ပြုလုပ် အမျှပေးဝေခြင်း၊
(၅) မိဘတို့၏ မျိုးနွယ် အမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ရခြင်း။ အတတ်လည်းသင်၊ ပဲ့ပြင်ဆုံးမ၊ သိပ္ပမချန်၊ ဘေးရန်ဆီးကာ၊ သင့်ရာအပ်ဖို့၊ ဆရာတို့၊ ကျင့်ဖို့ ၀တ်ငါးဖြာ။
(၄) တပည့်များ ဘေးအန္တရာယ် မဖြစ်စေရန် ကြိုတင်တားဆီး ကာကွယ်ပေးရခြင်း၊
(၅) မိမိထက် ကျေးဇူးပြုနိုင်မည့် ဆရာထံသို့ အပ်နှံပေးရခြင်း။ ညီညာထကြွ၊ ဆုံးမနာယူ၊ လာမူကြိုဆီး၊ ထံနှီး. လုပ်ကျွေး၊ သင်တွေးအံရွတ်၊ တပည့်ဝတ်၊ မချွတ် ငါးခုသာ။
(၁) ဆရာသင်ကြား ဆုံးမသမျှကို လေးစားစွာ ဂရုတစိုက် နာခံမှတ်သား ရခြင်း (ဆုံးမနာယူ)၊
(၂) ဆရာလာသောအခါ ညီညာစွာ မတ်တတ်ရပ်လျက် ခရီးဦး ကြိုဆိုရခြင်း ( လာမူကြိုဆီး)၊
ကြံစည် သင်အံလေ့ကျက် နှုတ်တက်ရွက်ဆို ရခြင်း (သင်တွေးအံရွတ်)။ ပေးကမ်းချီးမြှင့်၊ ကိုယ်နှင့်ယဉ်ထား၊ စီးပွားဆောင်ရွက်၊ နှုတ်မြွက်ချိုသာ၊ သစ္စာမှန်စေ၊ ၀တ်ငါးထွေ၊ ကျင့်လေ မိတ်သဟာ။
(၂) ကိုယ့်အောက်သို့ မနှိမ့်ချမူ၍ ကိုယ်နှင့်တန်းတူထားကာ ဆက်ဆံခြင်း၊
(၃) နှစ်ဦးနှစ်ဝ ကြီးပွားရန်အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရခြင်း၊
(၅) စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် သစ္စာဖောက်ဖျက်မှု မရှိဘဲ မှန်ကန်တိကျခြင်း။ ကျေးဇူးခံ မိတ်ဆွေကျင့်ဝတ် ၅-ပါး လင်ကျင့်ဝတ် ၅-ပါး မယားကျင့်ဝတ် ၅-ပါး အလုပ်ရှင်ကျင့်ဝတ် ၅-ပါး အလုပ်သမားကျင့်ဝတ် ၅-ပါး မေ့လျော့စောင့်လာ၊ ဥစ္စာစောင့်ရှောက်၊ ဘေးရောက်ကိုးကွယ်၊ ဘေးတွယ်မပစ်၊ သားမြစ်စဉ်ဆက်၊ မပျက်ချီးပင့်၊ ၀တ် ငါးဆင့်၊ ပြုကျင့်မိတ်ဆွေများ။
(၅) သားစဉ်မြေးဆက် အဆက်ဆက် မိတ်ဝတ်မပျက်ဘဲ ပေးကမ်းချီးမြှင့်ရခြင်း။ မထီမဲ့ကင်း၊ အပ်နှင်းဥစ္စာ၊ မိစ္ဆာမှား၊ ၀တ်စားဆင်ယင်၊ မြတ်နိုးကြင်၊ ငါးအင် လင်ကျင့်ရာ။
(၅) မြတ်နိုးကြင်နာစွာ ဆက်ဆံရခြင်း။ အိမ်တွင်းမှုလုပ်၊ သိမ်းထုပ်သေချာ၊ မိစ္ဆာကြဉ်ရှောင်၊ လျော်အောင်ဖြန့်ချိ၊ ပျင်းရိမမှု၊ ၀တ်ငါးဆူ၊ အိမ်သူ ကျင့်အပ်စွာ။
(၂) မိမိလင်ယောက်ျား အပ်နှံလာသော ဥစ္စာများကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်း ထိန်းသိမ်းထားရခြင်း၊
(၃) မိမိယောက်ျားမှ တပါးသော ယောက်ျားတို့နှင့် မမှားယွင်း မဖောက်ပြန်ရခြင်း၊
(၄) မိမိဘက်ဆွေမျိုး လင်ဘက်ဆွေမျိုးတို့၌ မျှမျှ တတ ပေးကမ်းရခြင်း၊
(၅) လုပ်ငန်းကိစ္စ အ၀၀၌ ပျင်းရိခြင်းကင်း၍ ကျွမ်းကျင်ရခြင်း။ ၀စွာ ကျွေးမွေး၊ ပြုရေးစီရင်၊ နာလျှင်ကုစေ၊ ငှဝေရသာ၊ အခါကိုလွှတ်၊ အရှင်ဝတ်၊ မချွတ် ငါးခုသာ။
(၂)သူတို့လုပ်နိုင်သော အလုပ်ကိုသာ လုပ်စေပြီး သင့်လျော်သောအချိန်၌ ခိုင်းစေရခြင်း၊
လွှတ်ရခြင်း။ အိပ်သော်နောက်ကျ၊ ထသော်ကားရှေ့၊ ပေးမှယူအပ်၊ စေ့စပ်ဆောင်ရွက်၊ ကျေးဇူးမြွက်၊ ငါးချက် ကျွန်ကျင့်ရာ။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Wednesday,6July 2011
Buddhism Buddhism was founded in the fourth or fifth century B.C. in northern India byaman known traditionally as Siddhartha (meaning “he who has reached the goal”) Gautama, the son ofawarrior prince. Some scholars believe that he lived from 563 to 483 B.C., though his exact life span is uncertain. Troubled by the inevitability of suffering in human life, he left home andapampered life at the age of 29 to wander as an ascetic, seeking religious insight andasolution to the struggles of human existence. He passed through many trials and practiced extreme self-denial. Finally, while meditating under the bodhi tree (“tree of perfect knowledge”), he reached enlightenment and taught his followers about his new spiritual understanding. Gautama's teachings differed from the Hindu faith prevalent in India at the time. Whereas in Hinduism the Brahmin caste alone performed religious functions and attained the highest spiritual understanding, Gautama's beliefs were more egalitarian, accessible to all who wished to be enlightened. At the core of his understanding were the Four Noble Truths: (1) all living beings suffer; (2) the origin of this suffering is desire—for material possessions, power, and so on; (3) desire can be overcome; and (4) there isapath that leads to release from desire. This way is called the Noble Eightfold Path: right views, right intention, right speech, right action, right livelihood, right effort, right concentration, and right ecstasy. Gautama promoted the concept of anatman (thataperson has no actual self) and the idea that existence is characterized by impermanence. This realization helps one let go of desire for transient things. Still, Gautama did not recommend extreme self-denial but ratheradisciplined life called the Middle Way. Like the Hindus, he believed that existence consisted of reincarnation,acycle of birth and death. He held that it could be broken only by reaching complete detachment from worldly cares. Then the soul could be released into nirvana (literally “blowing out”)—an indescribable state of total transcendence. Gautama traveled to preach the dharma (sacred truth) and was recognized as the Buddha (enlightened one). After his death his followers continued to develop doctrine and practice, which came to center on the Three Jewels: the dharma (the sacred teachings of Buddhism), the sangha (the community of followers, which now includes nuns, monks, and laity), and the Buddha. Under the patronage of the Mauryan emperor Ashoka (third century B.C.), Buddhism spread throughout India and to other parts of Asia. Monasteries were established, as well as temples dedicated to Buddha; at shrines his relics were venerated. Though by the fourth century A.D. Buddhist presence in India had dwindled, it flourished in other parts of Asia. Numerous Buddhist sects have emerged. The oldest, called the Theravada (Way of the Elders) tradition, interprets Buddha asagreat sage but notadeity. It emphasizes meditation and ritual practices that help the individual become an arhat, an enlightened being. Its followers emphasize the authority of the earliest Buddhist scriptures, the Tripitaka (Three Baskets),acompilation of sermons, rules for celibates, and doctrine. This sect is prevalent in Southeast Asia and Sri Lanka. It is sometimes called the Hinayana (Lesser Vehicle) tradition (once consideredapejorative term). Between the second century B.C. and the second century A.D., the Mahayana (Greater Vehicle) tradition refocused Buddhism to concentrate less on individual attainment of enlightenment and more on concern for humanity. It promotes the ideal of the bodhisattva (enlightened being), who shuns entering nirvana until all sentient beings can do so as well, willingly remaining in the painful cycle of birth and death to perform works of compassion. Members of this tradition conceive of Buddha as an eternal being to whom prayers can be made; other Buddhas are revered as well, addingapolytheistic dimension to the religion. Numerous sects have developed from the Mahayana tradition, which has been influential in China, Korea, and Japan. A third broad tradition, variously called Vajrayana (Diamond Vehicle), Mantrayana (Vehicle of the Mantra), or Tantric Buddhism, offersaquicker, more demanding way to achieve nirvana. Because of its level of challenge—enabling one to reach enlightenment in one lifetime—it requires the guidance ofaspiritual leader. It is most prominent in Tibet and Mongolia. Zen Buddhism encourages individuals to seek the Buddha nature within themselves and to practiceadisciplined form of sitting meditation in order to reach satori—spiritual enlightenment.
Pentronas Company နှင့် GLORY Career Training Centre တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်အရ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းများကို ထားဝယ်ဒေသသို့ သွားရောက်ကာ ပို့ချပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ GLORY သင်တန်းကျောင်းမှ Trainer များပုိ့ချခဲ့သော သင်တန်းများမှာ Electrical Installation and Wiring သင်တန်းများနှင့် Refrigeration and Air-conditioning သင်တန်းတို့ဖြစ်ပြီး အဆိုပါ သင်တန်းများကို Yetagon Socio-Eco Development Program အစီအစဉ်အရ ထားဝယ်နှင့် ကန်ဘောက်ဒေသခံများကို စိစစ်ရွေးချယ်ကာ အခမဲ့ သင်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ်ကို MOGE, PTTEP, NIPPON OIL နှင့် PC Myanmar တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ဘန်ကောက်မြို့တွင် မေ(၅)ရက်၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် POC (Pipeline Operating Centre) မှ မန်နေဂျာ Mr.David နှင့် PC Myanmar မှ တာဝန်ရှိသူများမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကာ အခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ အခမ်းအနားကို ရပ်မိရပ်ဖများနှင့် သင်တန်းသား (၆၀) ဦး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သင်တန်းကာလမှာ (၁၄) ရက်ကြာပြီး စာတွေ့လက်တွေ့ အချိန်ပြည့် သင်တန်းအဖြစ် အနာဂတ်ထားဝယ် ဒေသတွင် ပေါ်ပေါက်လာမည့် အခွင့်အလမ်းများအတွက် ရည်ရွယ်ကာ ပို့ချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ပို့စ်တင်သူ ။.............။ ( MMSA ) on Monday,4July 2011
ဒေသနာကြား- အာပတ်ဖြေ သံဃာချင်း ဒေသနာကြား (အာပတ်ဖြေ) ပုံ
''သင်တို့ ဘုရားမနှစ်သက်တာ လုပ်လျှင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ရမည်''
အငယ်။ ။ သာဓု ဘန္တေ သာဓု သာဓု။ကောင်းပါပြီ အရှင်ဘုရား ကောင်းပါပြီ ကောင်းပါပြီ။
မွေးဖွားလာတယ်ဆိုတာ ရေစက်ရှိသူတွေ စုံဆည်းနိူင်ဖို့အတွက်ပါ၊ ကောင်းသောဆုံတွေ့ခြင်းဟာ ဘဝအတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေပြီး ၊ မကေင်းတဲ့ ဆုံဆည်းခြင်းဟာ ဘဝအတွက် အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်စေပါတယ်။